डा.केसीको अनसनमा सम्पादकहरुको समर्थन, सरकारको ध्यानाकर्षण ! - डा.केसीको अनसनमा सम्पादकहरुको समर्थन, सरकारको ध्यानाकर्षण !
डा.केसीको अनसनमा सम्पादकहरुको समर्थन, सरकारको ध्यानाकर्षण !
नेपालबहस संवाददाता २०७५,6श्रावण, 05:29:49 PM
काठमाडौ, ६ असार । २३ दिनदेखि अनसनरत डा.गोविन्द केसीका मागमा मुख्य पत्रिकासहित विभिन्न मिडियाका सम्पादकहरुले पनि ऐक्यबद्धता जनाएका छन ।
विभिन्न पत्रिका र सञ्चारमाध्यमका झण्डै १५ जना सम्पादकसहितको टोलीले आइतबार त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज पुगी डा.केसीलाई भेटेर उनका मागमा ऐक्यबद्धता जनाएका हुन । भेटपछि डा.केसीका माग तत्काल पुरा गर्न सम्पादकहरुले सरकारसँग माग पनि गरेका छन ।
सेतोपाटी डटकमका सम्पादक अमित ढकालको नेतृत्वमा गएको टोलीमा कान्तिपुर दैनिकका पुर्वसम्पादक सुधीर शर्मा, वर्तमान सम्पादक नारायण वाग्ले, नागरिक दैनिकका सम्पादक गुणराज लुँइटेल, बाह्रखरीका सम्पादक प्रतिक प्रधान, अन्नपूर्ण पोष्टका सम्पादक राजाराम गौतम लगायत थिए ।
चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राखेर १५ औँ पटकसम्म डा.केसीले अनसन बस्नु देशका लागि लाजमर्दो विषय भएको टिप्पणी गर्दै उनीहरुले सरकार अब गम्भिर बन्नुपर्नेमा जोड समेत दिएका छन ।
पटक पटकको अनसनले थलिसकेका डा.केसीको स्वास्थ्य अवस्था चिन्ता जनक भएको पनि सम्पादकको टोलीले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
यसअघि डा.केसीको अनसनमा पनि सम्पादकले समर्थन जनाएका थिए । तर अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार २३ औ दिन पुगिसक्दा पनि डा.केसीका माग सम्बोधन बारे मौन छ ।
यसअघि यो चरणमा वार्ता निष्कर्षमा पुगेर डा.केसीले अनसन तोड्ने गरेका थिए । तर ओली सरकारको रुखो स्वभाव र रबैयाले डा.केसीको अनसन थप लम्बिने देखिएको छ ।
स्वास्थ्य अवस्था जटिल बनेको र डा.केसीको जीवन रक्षाका लागि भन्दै जुम्लाबाट उठाएर काठमाडौँको शिक्षण अस्पतालमा राख्ने बाहेक डा.केसीका लागि सरकारले अरु केही गरेको छैन ।
सरकारको यो मौनताप्रति नागरिक समाज आन्दोलित भइरहेका बेला सबै मिडियाका सम्पादकले पनि डा.केसीलाई समर्थन गरेपछि सरकार थप दबाबमा परेको छ ।
दबाब यसकारण पनि छ की डा.केसीले चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदबाट फिर्ता नभएसम्म अनसन नतोड्ने बताइरहेका छन । डा.केसीको यही ‘बटमलाइन’का कारण सरकार वार्ताबाटै पन्छिरहेको हो ।
डा.केसीको यही माग अनुसार सरकारले संसदबाट विधेयक फिर्ता गर्ने अवस्था आयो भने दुई तिहाईको दम्भ देखाउने ओली सरकारको घमण्ड छताछुल्ल हुने सत्तारुढ दलका नेता कार्यकर्ताको बुझाई छ ।
यसकारण पनि डा.केसीका माग सम्बोधनमा ढिलाई भइरहेको छ । तर अनसन लम्बिदै जाँदा केसी नभई ओली सरकार नै गल्ने भएकाले माग सम्बोधन गर्न नागरिक समाजले दबाब बढाएका हुन ।
२०७५,6श्रावण, 05:29:49 PM